DHAAYAHA SAXAAFADDA Q-9AAD W/Q: Xasan Maxamed Xaaji “Duusoos” | Laashin iyo Hal-abuur
DHAAYAHA SAXAAFADDA Q-9AAD W/Q: Xasan Maxamed Xaaji “Duusoos”
DHAAYAHA SAXAAFADDA Q-9AAD
Kacaankii daabacaaddu wuxuu dhacay markii la soo saaray ka dibna la faafiyay daabacaadda, daabacaadduna ay fududeysay faafitaanka weyn ee macluumaadka iyo fikradaha oo ay u noqotay “wakiil isbeddel” oo bulshada dhexdeeda ah. Abu uritaanka daabacaadda nooca guurguura ee farsamada ayaa horseeday koror ballaaran oo howlaha daabacaadda ee guud ahaan qaaradda Yurub dhowr iyo toban sano gudahood. Laga soo billaabo hal dukaan daabacadeed ku yiillay Mainz, Jarmalka. Daabicitaanku wuxuu ku faafay ugu yaraan 270 magaalo oo ku yaal bartamaha, galbeedka iyo bariga Yurub dhammaadka qarnigii 15-aad. Horraantii 1480, waxaa jiray madbacado si firfircoon uga shaqeeya 110-meelood oo kala duwan oo ku yaal Jarmalka, Talyaaniga, Faransiiska, Isbaanishka, Nederland, Beljam, Switzerland, England, Bohemia iyo Poland. Waqtigaas laga billaabo, waxaa loo qaatay in “buugga daabacan uu ahaa mid guud ahaan Yurub laga isticmaali jiray”.
Talyaaniga oo ah xarunta daabacaadda goor hore, dukaamo daabacadeed ayaa laga aasaasay 77-magaalo iyo magaalooyin ilaa 1500 gaaraya. Dhammaadka qarnigii xigay, 151-goobood oo ku yaal Talyaaniga ayaa hal mar lagu arkay howlaha daabacaadda, iyadoo wadar ahaan ku dhowaad saddex kun oo madbacado ah kor u dhaafay, loona yaqaannay; daabacaadda firfircoonaan. Inkasta oo ay sii kordheen, xarumo daabacadeed ayaa waxaa soo baxay; sidaas, saddex meelood meel ka mid ah madbacadaha Talyaaniga ee lagu daabacay Venice.
Markii ay ahayd 1500, madbacadaha ka hawlgala galbeedka Yurub oo dhan waxay hore u soo saareen in ka badan labaatan milyan oo nuqul. Qarnigii xigay, waxsoosaarkoodu wuxuu toban jibaarmay oo lagu qiyaasay 150 ilaa Madbacadaha Yurub ee qiyaastii 1600 waxay awood u lahaayeen inay soo saaraan inta u dhaxeysa 1,500  iyo 3,600 aragti maalin kasta. Marka la barbardhigo, daabacaadda bariga fog, halkaasoo dhabarka warqadda si gacmo leh loogu xoqay bogga, kama badin wax soo saar afartan bog ah maalintii. Shaqada Erasmus, ugu yaraan 750,000 nuqul ayaa la iibiyay intii uu noolaa: (1469 – 1536).
Maalmihii ugu horreeyay ee dib-u-habeynta, awoodda kacaan ee daabacaadda tirada badan waxay layaab ku noqotay amiirro iyo wadaadnimo. Muddadii u dhaxeysay 1518 ilaa 1524, daabacaadda buugaagta Jarmalka oo kali ah ayaa cirka isku shareertay toddoba jibbaar; intii u dhaxeysay 1518 iyo 1520, Luther wargeysyadiisa waxaa loo qeybiyay 300,000 nuqul oo daabacan. Xawliga soo saarista qoraalka iyo sidoo kale hoos u dhaca ku yimid qiimaha unugyada, ayaa horseeday soo saarista wargeysyadii ugu horreeyay, kaas oo furay gebi ahaanba goob cusub oo loogu talagalay in dadweynaha loogu gudbiyo macluumaadka ugu dambeeyay. Waxaana badbaaday shaqadii daabacaadda ee ka hor-qarnigii 16-aad oo ay ururiyeen maktabado badan oo ku yaal Yurub iyo Waqooyiga Ameerika.
Sawir gacmeedka “Buugga casriga ah” oo lagu xusayo hal-abuurnimadii Gutenberg munaasibaddii koobkii adduunka ee 2006 ee Jarmalka. Madbacadda daabacaaddu waxay sidoo kale ahayd qoob aasaas u ah bulsho aqoonyahanno ah oo si fudud ugu gudbin kara wixii ay heleen iyaga oo u maraya aasaasidda joornaallo aqoonyahanno si ballaaran loo faafiyo oo gacan ka geysanaya keenista kacaanka sayniska. macno badan oo faa’iido leh. Waxay ahayd lama filaan muhiim ah si weynna u kaabay socdaalka loogu jiro cilmiga adduun weynaha iyo qaabsammeysanka sayniseed ee jiraalka carra’edeg. Tani waxay oggolaatay tixraaca saxda ah ee tixraacyada, soo saarista xeerka, “Hal qoraa, hal shaqo (cinwaan), hal macluumaad” (Giese). Farsamooyinka ama mabaadii’da loo isticmaalay in lagu soo saaro walxaha daabacan waxaa si guud loogu qaybin karaa laba kooxood, iyadoo ku xidhan haddii ay farsamadu adeegsanayso foom daabacan iyo in kale.
Farsamooyinka daabacaadda ku-daabacan daabacaadda – farsamooyinka adeegsanaya qaab daabacan oo muuqaal ahaaneed oo dhisa sawirka daabacaadda ee gaara ka soo horjeedka, tusaale ahaan saxan daabacaad sida loo dheellitiray, saxan naxaas ah oo xardhan sida xardhka naxaasta, maro wanaagsan oo mesh leh emulsion adag sida silkscreen. Farsamooyinka daabacaadda qaab-ku-saleysan ee aan daabacaadda ahayn – farsamooyinka aan isticmaalin qaab muuqaal ahaaneed oo daabacan. Tan waxaa ka mid ah farsamooyinka daabacaadda dhijitaalka ah, sida inkjet (jet jet) iyo xerography (elektrograafiga).
Kooxda farsamooyinka daabacaadda ku saleysan caaryada dhexdeeda, inta badan waxaa jira afar koox-hoosaadyo oo ku saleysan mabda’a caaryada: Cadaadis sare – wuxuu isticmaalaa foomka daabacaadda halka dusha sare ee daabacaadda laga soo qaadayo dusha meelaha aan daabacaneyn, sida shaabad. Tan waxaa ka mid ah, tusaale ahaan, dabacsanaanta qoraalka iyo daabacaadda waraaqaha tiknoolajiyada daabacaadda warshadaha iyo jarista qoryaha iyo linoleum ee daabacaadda farshaxanka. Daabacaadda Gravure – halka ay dusha sare ee daabacaaddu ka kooban tahay niyadjab ku jira qaabka daabacaadda. Tan waxaa ka mid ah, tusaale ahaan, daabacaadda xardhan ee wax soo saarka warshadaha, iyo naxaas lagu xardho daabacaadda farshaxanka.
Flat flat ama print dusha sare halka daabacaada iyo meelaha aan daabacan lagu kala bixin sababo la xiriira sifooyinka kiimikada kala duwan ee dusha sare (in dusha sare ee daabacadu soo jiito khad daabacan iyo dusha sare ee daabacaadda oo celisa khad) oo aysan ku kala duwaneyn heerka. Tan waxaa ka mid ah isu dheellitir la’aanta lithographic iyo lithography lithography.
Daabacid, waxay isticmaashaa foom daabacan oo u oggolaanaya rinjiyeynta dusha daabacaadda kana horjoogsanaysa rinjiga inuu gaaro substrate-ka dusha meelaha aan daabacadda lahayn, sida stencil ama stencil. Tan waxaa ka mid ah silkscreen (serigraphy) iyo muuqaalka sawirka. Teknolojiyada daabacaadda waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu soo saaro walxaha qoran sida joornaalada iyo buugaagta ee farshaxanka daabacaadda. Tikniyoolajiyadda daabacaadda iyadoo la adeegsanayo macnaheeda ugu fudud ayaa durba ka dhex jirta walxaha dhoobada ugu da’da weyn, halkaas oo xarkaha, qaybaha lafaha, maraakiibta badda iyo kuwo kale oo badan lagu riixo badeecadaha. Sida ugu dhakhsaha badan farshaxanka qoraalka ayaa u kacay, waraaqaha la jarjaray si isku mid ah ayaa loogu cadaadiyey. Mid ka mid ah tusaalooyinka ugu da’da weyn ayaa laga yaabaa in loo yaqaan ‘Faistos counter’ oo laga helay Crete laga soo billaabo 1000s BC. (si kastaba ha noqotee, waxaa su’aal ka taagan tahay in tani runtii tahay dabeecad).
Shiinaha dhexdiisu, waxay billaabeen inay daabacaan dhar ay ku jiraan qoryo sannadihii 200, balse, tani ma aysan helin faafitaan ka ballaaran midka Shiinaha. Hawsha wax ku oolka ah ee farsamooyinka daabacaaddu aad bay u koobnayd. Dhinaca kale, warqad ayaa lagu soo hindisay Shiinaha 100-meeyadii, billowgii 800-naadkiina, qoraallo ayaa lagu daabacay warqad Shiinaha ku taal. Yaraanta iibsadayaasha badeecooyinka sida badan loo soo saaray ayaa baahida ka dhigtay mid xaddidan, balse, qaabka qoraalka Shiinaha oo adag iyo aaladda gobolka ayaa wali ka dhigtay baahida daabacaadda mid aad u ballaaran.
Qarnigii sideedaad, Carabtu waxay ikhtiraaceen farsamada samaynta waraaqda marada taas oo ku faafay Yurub xilligii qarniyadii dhexe. Si kastaba ha noqotee, farsamooyinka daabacaadda ayaa hakad ku yimid horumarkooda, kaliya qarnigii 15-aad ayey labada farsamood ku jabiyeen xardhka naxaasta iyo qoryo. Labada farsamaba way ka da ‘weyn yihiin Yurub marka loo eego farshaxanka dhabta ah ee daabacaadda oo leh noocyada leedhka, in badan oo ka mid ah shaqooyinkii daabacaadda hore ayaa lagu daabacay xaashi. Woodcuts wuxuu noqday mid ka jaban labada teknolojiyad, billowgii kharashka warqadda waxaa loola jeedaa in tikniyoolajiyaddu aysan ku faafin si aad u weyn, balse, iyadoo waligeedba ay ka hooseyso qiimaha waraaqaha, goynta ayaa noqotay mid ku badan dadka caadiga ah qarniyadii 18-aad iyo 19-aad.
Xardho naxaasku wuxuu ahaa farsamada ugu qaalisan, balse, waxaa loo oggol yahay faahfaahin dheeri ah. Waxaa loo adeegsaday farsamadii ugu muhiimsanayd ee sawirrada ee shaqooyinka cajiibka ah ilaa ay soo ifbaxayaan farsamayaqaannada casriga ee qarnigii 19-aad. Sida farshaxan sameynta, waxay ku sii socotaa maanta.
Qarnigii 16-naad, isugeynta ayaa sidoo kale la allifay, ugu horreyn looma jeedin in loo isticmaalo soo saarista taarikada daabacaadda balse, loogu talagalay biraha xardhan, markii dambena sidoo kale dhalooyinka, sidoo kale waxaa loo adeegsaday soo saarista taarikada daabacaadda. Waxaa markii hore loo adeegsaday ujeeddooyin farshaxan oo kaliya, sidoo kale waxaa loo adeegsaday sawirrada buugaagta. Qarnigii 17-aad, waxay billaabeen inay daabacaan maryo leh alwaax, alwaax leh Yurub iyo Aasiya, laga soo billaabo qarnigii 18-aad, waxay kale oo ay billaabeen inay daabacaan xardho naxaas. Dharka suufka ah ee daabacan ayaa markaa ku faafay guud ahaan “adduunka casriga ah” qarnigii 18-aad. Qarnigii 18-aad, dadku waxay sidoo kale billaabeen inay ku tijaabiyaan qurxinta daabacadaha. Laga soo billaabo dhammaadkii qarnigii 18-aad, suxuunta flintware ee Ingiriisiga daabacan ayaa si dhakhso leh caan ugu noqday.
Sannadkii 1775-kii, alwaaxa la xardhay ayaa la allifay, taas oo macnaheedu yahay in qoryaha adag la sifeeyay oo loo xardhay si la mid ah saxan naxaas ah oo ku xardhan naxaasta. Markii hore, isticmaalku aad buu u yaraa, balse, qarnigii 19-aad si dhakhso ah ayuu caan ugu noqday farsamo daabacadeed. Awoodda xardho ee naxaasta ah ee faafaahinta qiimaha jaban ee qoryaha oo la xukumay ilaa qarnigii 19-aad sannadihiisii hore.
Sannadkii 1796, lithography ayaa sidoo kale la ikhtiraacay, taas oo si dhakhso ah u noqotay farsamo daabacaad caan ah. Si kastaba ha noqotee, maahan ilaa markii la allifay lithography midab casri ah 1837 in lithography si dhakhso leh u noqotay farsamo sawir caan ah. Markii hore, waxay ahayd inaad gacanta midab ku xardho ama geedo jarid si aad u hesho sawirro daabacan oo midab leh. Tikniyoolajiyadda midabka lithographic-ka ayaa la sameeyay lana hagaajiyay sannadihii ugu dambeeyay ee qarnigii 19-aad, si markaa sidoo kale loogu isticmaali karo agabyada kale, waxayna dhalisay qurxinta baakadaha daabacan qiyaastii qarnigii 1900. Lithographic sheet sheet alaabada carruurtu ay ku ciyaaraan ayaa noqday aag kale oo muhiim u ah adeegsiga tikniyoolajiyadda.
1820 ayaa xardho birta la allifay. Markii hore waxaa badanaa loo adeegsaday sawirrada buugaagta, balse, si dhakhso leh ayey u jabtay daabacadaha iyadoo loo baahan yahay faafaahin dheeri ah, halkaas oo xardhadii naxaasku hore u maamuli jirtay, sida waraaqaha lacagta lagu qoro iyo shaambadaha dambe. Sannadkii 1843, ayaa la allifay madbacadda meertada ah, taas oo suurta gelisay daabacaadaha waaweyn.